ဈေးကွက်နှစ်ချုပ် (၅ .၁ .၁၈) – Myanmar Forex Villa
ဈေးကွက်နှစ်ချုပ် (၅ .၁ .၁၈)
– အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ ၁၄ နှစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးအနေထားနဲ့ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာလည်း ဆက်လက် ကျဆင်းမယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
– Fed ဟာ ဒီနှစ်အတွင် အတိုးနှုန်း ၇၅ ပွိုင့်လောက် တက်မယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း တအား နည်းလွန်းနေတာ၊ အခွန်ငွေလျှော့ချထားတာ၊ customer confidence၊ business confidence တွေက လာမယ့်နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
– တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့အကြား စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုက ဒီနှစ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
– မနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဥရောပဇုန်ရဲ့ PMI အချက်အလက်ဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့တာကြောင့် EURUSD ကို အမြင့်ဆုံးအဖြစ် ၁့၂၀၈၉ပွိုင့်အထိ ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။
– ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဥရောပရဲ့ နိုင်ငံရေးအလှုပ်အခတ်တွေဟာ ယူရိုအပေါ် အဓိကသက်ရောက်မယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီက ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အစိုးရဖွဲ့မှုအခြေအနေ၊ စပိန်က ကာ့တ်လန်ဒေသ ခွဲထွက်ရေးကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
– ဥရောပဗဟိုဘဏ်နဲ့ အမေရိကန် Fed တို့အကြား ပေါ်လစီကွဲလွဲမှုက ယူရိုအပေါ် ဖိအားဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– EURUSD ဟာ မနေ့က ၁့၂၀၈၉ ပွိုင့်နဲ့ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ ၁့၂၀၈၀နဲ့ ၁့၂၀၆၄ ကြားမှာ အတက်အကျ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ CPI အချက်အလက်ဟာ ၁၇့၀၀ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ဒီကနေ့ထွက်မယ့် အမေရိကန်ရဲ့ non-farm payroll ကလည်း ယူရိုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ယူရိုဟာ အတက်နဲ့ ပိတ်သွားဖို့ရှိနေပြီး အခုအချိန်အထိ ဈေးကျမယ့် အနေအထားမျိုးကို မတွေ့ရသေးပါဘူး။
– စတာလင်ပေါင်ဟာ လက်ရှိမှာ ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲ သွားနေပြီး မေရိကန်ဒေါ်လာ ကျဆင်းတာနဲ့ ယူရိုတက်လာတာတွေကြောင့် ဖြစပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူရိုနဲ့ ဗြိတိန်တို့ Brexit ကိစ္စတိုးတက်မှုက ယူရိုအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– Brexit ကိစ္စ အခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင် ယူရိုက တက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေရဲ့ နိုင်ငံရေးအနေအထား ကလည်း စတာလင်ပေါင်ကို ဖိအားဖြစ်စေမှာပါ။ ယူကေရဲ့ ဂျီဒီပီဟာ ပုံမှန်အတိုင်း တက်နေပြီး အလုပ်သမားဈေးကွက်ကလည်း ကောင်းနေပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကတော့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာ ရှိနေပါတယ်။
– GBPUSD ဟာ လက်ရှိမှာ sell ပုံစံ ပြနေပြီး ၁့၃၅၈၅ လောက်အထိ တက်ပြီးမှ ပြန်ကျမယ့်အနေအထား ရှိနေပါတယ်။ ၁၃၄၉၅ ပွိုင့်အောက်မှာရှိရင် ဈေးက ၁့၃၃၁၀ အထိ ဆင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့ညထွက်မယ့် အမေရိကန်ရဲ့ non-farm payroll က GBPUSD အပေါ် သက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– အမရေိကနျဒျေါလာဟာ ၁၄ နှဈအတှငျး အဆိုးဝါးဆုံးအနထေားနဲ့ ကဆြငျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာလညျး ဆကျလကျ ကဆြငျးမယျလို့ ခနျ့မှနျးမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။
– Fed ဟာ ဒီနှဈအတှငျ အတိုးနှုနျး ၇၅ ပှိုငျ့လောကျ တကျမယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ အလုပျလကျမဲ့နှုနျး တအား နညျးလှနျးနတော၊ အခှနျငှလြှေော့ခထြားတာ၊ customer confidence၊ business confidence တှကေ လာမယျ့နှဈအတှငျး စီးပှားရေးတိုးတကျမှုကို အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့အရာတှေ ဖွဈပါတယျ။
– တရုတျနဲ့ ရုရှားတို့အကွား စီးပှားရေး ပေါငျးစညျးမှုက ဒီနှဈအတှငျး အမရေိကနျဒျေါလာအပျေါ သကျရောကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
– မနကေ့ထှကျခဲ့တဲ့ ဥရောပဇုနျရဲ့ PMI အခကျြအလကျဟာ မြှျောလငျ့ထားတာထကျ ပိုမိုကောငျးမှနျခဲ့တာကွောငျ့ EURUSD ကို အမွငျ့ဆုံးအဖွဈ ၁့၂၀၈၉ပှိုငျ့အထိ ရောကျစခေဲ့ပါတယျ။
– ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျးမှာ ဥရောပရဲ့ နိုငျငံရေးအလှုပျအခတျတှဟော ယူရိုအပျေါ အဓိကသကျရောကျမယျ့ အကွောငျးအရငျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ အီတလီက ရှေးကောကျပှဲ၊ ဂြာမနီဝနျကွီးခြုပျရဲ့ အစိုးရဖှဲ့မှုအခွအေနေ၊ စပိနျက ကာ့တျလနျဒသေ ခှဲထှကျရေးကိစ်စတှေ ဖွဈပါတယျ။
– ဥရောပဗဟိုဘဏျနဲ့ အမရေိကနျ Fed တို့အကွား ပျေါလစီကှဲလှဲမှုက ယူရိုအပျေါ ဖိအားဖွဈစမှော ဖွဈပါတယျ။
– EURUSD ဟာ မနကေ့ ၁့၂၀၈၉ ပှိုငျ့နဲ့ အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျခဲ့ပွီး ဒီကနမှေ့ာတော့ ၁့၂၀၈၀နဲ့ ၁့၂၀၆၄ ကွားမှာ အတကျအကြ ဖွဈနပေါတယျ။ ဥရောပရဲ့ CPI အခကျြအလကျဟာ ၁ရ့၀၀ ရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပွီး ဒီကနထှေ့ကျမယျ့ အမရေိကနျရဲ့ non-farm payroll ကလညျး ယူရိုအပျေါ သကျရောကျမှု ရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ ယူရိုဟာ အတကျနဲ့ ပိတျသှားဖို့ရှိနပွေီး အခုအခြိနျအထိ ဈေးကမြယျ့ အနအေထားမြိုးကို မတှရေ့သေးပါဘူး။
– စတာလငျပေါငျဟာ လကျရှိမှာ ပုံမှနျအတိုငျးလေးပဲ သှားနပွေီး မရေိကနျဒျေါလာ ကဆြငျးတာနဲ့ ယူရိုတကျလာတာတှကွေောငျ့ ဖွစပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယူရိုနဲ့ ဗွိတိနျတို့ Brexit ကိစ်စတိုးတကျမှုက ယူရိုအပျေါ သကျရောကျမှုတှေ ရှိလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
– Brexit ကိစ်စ အခွအေနကေောငျးမယျဆိုရငျ ယူရိုက တကျလာမှာဖွဈပွီး ဗွိတိနျဝနျကွီးခြုပျ ထရီဇာမရေဲ့ နိုငျငံရေးအနအေထား ကလညျး စတာလငျပေါငျကို ဖိအားဖွဈစမှောပါ။ ယူကရေဲ့ ဂြီဒီပီဟာ ပုံမှနျအတိုငျး တကျနပွေီး အလုပျသမားဈေးကှကျကလညျး ကောငျးနပေါတယျ။ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုနှုနျးကတော့ ၂ ရာခိုငျနှုနျးအထကျမှာ ရှိနပေါတယျ။
– GBPUSD ဟာ လကျရှိမှာ sell ပုံစံ ပွနပွေီး ၁့၃၅၈၅ လောကျအထိ တကျပွီးမှ ပွနျကမြယျ့အနအေထား ရှိနပေါတယျ။ ၁၃၄၉၅ ပှိုငျ့အောကျမှာရှိရငျ ဈေးက ၁့၃၃၁၀ အထိ ဆငျးဖို့ရှိနပေါတယျ။ ဒီနညေ့ထှကျမယျ့ အမရေိကနျရဲ့ non-farm payroll က GBPUSD အပျေါ သကျရောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။
4 thoughts on “ဈေးကွက်နှစ်ချုပ် (၅ .၁ .၁၈)”
Awesome things here. I’m very satisfied to peer your article. Thank youalot and I am havingalook ahead to touch you. Will you kindly drop meamail?|
Previous Previous post: Free Forex Signals (EURJPY)
Next Next post: င်္Free Forex Signal (GBPUSD)